Ngwarira—Satani Anoda Kukudya! (1 Petro 5:8) | Yokudzidza
“Rindai. Mhandu yenyu Dhiyabhorosi, inofamba-famba seshumba inodzvova, ichitsvaka kudya mumwe munhu.”—1 PET. 5:8.
SATANI ANORATIDZA SEI KUTI ANE . . .
1. Tsanangura kuti imwe ngirozi yakava sei Satani.
PAKUTANGA, aiva ngirozi yaiva neushamwari hwakanaka naJehovha. Asi nekufamba kwenguva, ngirozi iyi yakatanga kuda kunamatwa nevanhu. Pane kuti ibvise mafungiro akaipa ayainge yava nawo, yakaarega achikura kusvikira abereka chivi. (Jak. 1:14, 15) Tinoziva ngirozi iyoyo nezita rokuti Satani, uyo asina “kumira zvakasimba muchokwadi.” Akapandukira Jehovha akabva ava “baba venhema.”—Joh. 8:44.
2, 3. Mazita okuti “Satani,” “Dhiyabhorosi,” “nyoka,” uye “dhiragoni,” anoratidzei nezvemuvengi mukuru waJehovha?
2 Kubvira paakapanduka, Satani ari kuratidza kuti muvengi mukuru waJehovha uye wevanhu. Mazita aanozivikanwa nawo anoratidza kuipa kwaakaita. Zita rokuti Satani rinoreva kuti “Mupikisi,” uye rinoratidza kuti ngirozi iyi yakaipa haitsigiri utongi hwaMwari, asi inohuvenga uye inohurwisa zvakasimba. Chinotonyanya kudiwa naSatani ndechokuti utongi hwaJehovha hugume.
3 Sezvinoratidzwa pana Zvakazarurwa 12:9, Satani anonzi Dhiyabhorosi, zvinoreva kuti “Mucheri.” Izvi zvinotiyeuchidza kuti Satani akasvibisa zita raJehovha nokumuti murevi wenhema. Mashoko okuti “nyoka yepakutanga,” anotiyeuchidza nezvezuva riya muEdheni, Satani paakashandisa nyoka kunyengera Evha. Mashoko okuti “dhiragoni huru” anoita kuti tifunge nezvechikara chinotyisa uye izvi zvinonyatsoenderana neutsinye husingaiti hunoratidzwa naSatani paanoedza kuvhiringidza chinangwa chaJehovha uye kuparadza vanhu vaMwari.
4. Tichakurukurei munyaya ino?
4 Zviri pachena kuti Satani ndiye muvengi mukuru anoda kutitadzisa kuramba takaperera kuna Jehovha. Ndokusaka Bhaibheri richitinyevera kuti: “Svinurirai, rindai. Mhandu yenyu Dhiyabhorosi, inofamba-famba seshumba inodzvova, ichitsvaka kudya mumwe munhu.” (1 Pet. 5:8) Tichifunga nezvenyevero iyi, munyaya ino tichakurukura unhu hutatu hwaSatani hwatinofanira kuziva kuti tizvidzivirire kumuvengi uyu waJehovha uye wevanhu vaMwari.
SATANI ANE SIMBA
5, 6. (a) Taura mienzaniso inoratidza kuti ngirozi dzine “simba guru.” (b) Nei Satani achinzi “ane simba rokukonzera rufu”?
5 Zvisikwa zvinonzi ngirozi zvine “simba guru.” (Pis. 103:20) Zvakachenjera chaizvo uye zvine simba guru kupfuura vanhu. Asi ngirozi dzakatendeka dzinoshandisa simba radzo kuita zvinhu zvakanaka. Somuenzaniso, pane imwe nguva, ngirozi yaJehovha yakauraya masoja 185 000 evaAsiriya avo vaiva vavengi vevanhu vaMwari. Hapana munhu aigona kuita zvakaitwa nengirozi iyi uye zvaizoomera kunyange masoja akawanda. (2 Madz. 19:35) Pamwe pacho ngirozi yakashandisa simba rayo neuchenjeri hwayo kubudisa vaapostora vaJesu mujeri. Ngirozi iyi yakapinda paiva pakachengetedzwa, ikakiyinura masuo ejeri ndokubudisa vaapostora, ikasiya yakiya zvakare. Zvose izvi zvakaitika varindi vejeri vasingatombozvioni.—Mab. 5:18-23.
6 Ngirozi dzakatendeka dzinoshandisa simba radzo zvakanaka, asi Satani anoshandisa simba rake kuita zvakaipa. Uye zvechokwadiwo Satani ane simba guru! Magwaro anoti ndiye “mutongi wenyika ino” uye “mwari wemamiriro ezvinhu epanguva ino.” (Joh. 12:31; 2 VaK. 4:4) Satani Dhiyabhorosi ane “simba rokukonzera rufu.” (VaH. 2:14) Izvi hazvirevi kuti anouraya vanhu vose zvakananga. Asi mafungiro ake eumhondi ndiwo akazara muvanhu mazuva ano. Uyewo, kubvuma kwakaita Evha nhema dzaSatani kwakaita kuti Adhamu asateerera Mwari, zvikaita kuti chivi norufu zvipararire kuvanhu vose. (VaR. 5:12) Saka tinogona kutaura kuti Dhiyabhorosi ane “simba rokukonzera rufu.” Jesu akatomuti “muurayi.” (Joh. 8:44) Chokwadi Satani muvengi ane simba chaizvo.
7. Madhimoni akaratidza sei kuti ane simba guru?
7 Patinorega kuita zvinodiwa naSatani, tinobva tavengwawo nevaya vose vanomutsigira pakuramba kuti Jehovha ndiye changamire. Vatsigiri vake ava vanosanganisira ngirozi dzakawanda dzakapanduka dzinonzi madhimoni. (Zvak. 12:3, 4) Kakawanda, madhimoni akaratidza simba guru achiita kuti vanhu vatambure zvikuru. (Mat. 8:28-32; Mako 5:1-5) Usambofa wakatarisira pasi simba rengirozi idzi dzakaipa kana ‘remutongi wemadhimoni.’ (Mat. 9:34) Hatingambokwanisi kurwisa Satani tikamukunda pasina rubatsiro rwaJehovha.
SATANI ANE UTSINYE
8. (a) Chinangwa chaSatani ndechei? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.) (b) Semaonero ako, nyika ino inoratidza sei utsinye huna Satani?
8 Muapostora Petro akafananidza Satani ‘neshumba inodzvova.’ Rimwe duramazwi rinoti shoko rechiGiriki rakashandurwa kuti “kudzvova” rinoreva “kuomba kunoita chikara kana chava nenzara.” Izvi zvinonyatsotsanangura utsinye neuipi hwaSatani! Kunyange zvazvo nyika yose iri musimba rake, haaguti uye ari kutoda vamwe vanhu vokudya. (1 Joh. 5:19) Anoona nyika sezvokudya zviya zvinonyautsa mukanwa. Uye anoona vaKristu vakazodzwa vachiri panyika neshamwari dzavo, ‘vemamwe makwai,’ sezvokudya zvinogutsa. (Joh. 10:16; Zvak. 12:17) Chinangwa chaSatani ndechekuparadza vanhu vaJehovha. Kutambudza kwaaiita vateveri vaJesu kubvira munguva yevaapostora kusvikira iye zvino, kunoratidza utsinye hwake.
9, 10. (a) Satani akaedza sei kuvhiringidza chinangwa chaMwari chaiva nechokuita nevaIsraeri? (Taura mienzaniso.) (b) Nei Satani aiti nanga nanga nevaIsraeri? (c) Unofunga kuti Dhiyabhorosi anonzwa sei kana mushumiri waJehovha akaita chivi chakakura mazuva ano?
9 Kuti avhiringidze chinangwa chaMwari, Satani anewo zvimwe zvaanoita zvinoratidza kuti ane utsinye. Shumba yafa nenzara haina tsitsi nemhuka yainenge ichida kubata uye haizvidembi kana yauraya mhuka yacho. Satani haanawo tsitsi nevaya vaanenge achida kudya. Somuenzaniso, unofunga kuti Satani Dhiyabhorosi ainzwa sei pose paaiona vaIsraeri vachiita zvivi zvakadai seunzenza uye makaro? Paunoverenga nezvematambudziko akazowira Zimri paakaita unzenza uye Gehazi paakaratidza makaro, unofunga kuti Satani akafara zvakadii nekukunda kwaainge aita?—Num. 25:6-8, 14, 15; 2 Madz. 5:20-27.
Satani anofara chaizvo kana mushumiri waJehovha akaita chivi (Ona ndima 10)
10 Satani airamba achiedza vaIsraeri nokuti aiziva kuti murudzi irworwo ndimo maizobva Mesiya uyo aizopwanya Satani oratidza kuti Jehovha ndiye ane kodzero yokutonga. (Gen. 3:15) Satani aida kuti vaIsraeri vasafarirwa naMwari, uye akaedza zvakasimba kuvasvibisa nechivi. Usambofunga kuti Dhavhidhi paakaita upombwe, Satani akamunzwira tsitsi. Uyewo usafunga kuti Satani akasiririswa Mosesi paakanzi haachakodzeri kupinda muNyika Yakapikirwa. Satani anofara chaizvo kana mumwe wevashumiri vaMwari akaita chivi chakakura. Kukunda ikoko kwaanenge aita anogona kutokushandisa kushora Jehovha.—Zvir. 27:11.
11. Chii chingangodaro chaiita kuti Satani aedze Sara?
11 Satani aivenga chaizvo dzinza raizoberekwa Mesiya. Somuenzaniso, funga zvakaitika Abrahamu achangobva kuudzwa naJehovha kuti aizova “rudzi rukuru.” (Gen. 12:1-3) Abrahamu naSara pavaiva muIjipiti, Farao akaita kuti Sara aunzwe kumba kwake kuti ave mudzimai wake. Zvisinei, Jehovha akapindira akanunura Sara padambudziko iri rakaoma. (Verenga Genesisi 12:14-20.) Nguva pfupi Isaka asati aberekwa, Sara akasanganazve nedambudziko rakafanana nairoro paaiva kuGerari. (Gen. 20:1-7) Kuti Satani ndiye aikonzera zvose izvi here? Kuti angava aitarisira here kuti Sara, uyo akanga asiya guta rakabudirira reUri achinogara mumatende, aizotorwa mwoyo nemuzinda wakanaka waFarao uye waAbhimereki? Satani aifunga here kuti Sara aizotadza kuramba akavimbika kumurume wake uye kuna Jehovha oroorwa nemumwe wevarume ava? Bhaibheri harina zvarinotiudza, asi zvinoita sokuti Dhiyabhorosi aizofara zvikuru kudai Sara aizonzi haana kukodzera kuti abereke mwana akanga avimbiswa. Satani aisazomborwadziwa kuona Sara achikanganisa wanano yake, zita rake rakanaka uye ukama hwake naJehovha. Satani ane utsinye chaizvo!
12, 13. (a) Satani akaratidza sei utsinye hwake pakaberekwa Jesu? (b) Unofunga kuti Satani anonzwa sei paanoona vana vaduku vanoda Jehovha uye vari kuedza kumushumira mazuva ano?
12 Jesu akazoberekwa papera mazana emakore kubva pakararama Abrahamu. Asi usafunga kuti Satani akaona Jesu somucheche akanaka kana kuti seanokosha. Aiziva kuti mwana uyu akanga achangoberekwa aizokura ova Mesiya akanga apikirwa. Chokwadi Jesu ndiye aiva mwana waAbrahamu, uyo ‘aizoputsa mabasa aDhiyabhorosi.’ (1 Joh. 3:8) Satani aizofunga here kuti kana akauraya mwana mucheche anenge anyanya kuita utsinye? Aiwa. Haana basa nekuti zvaanoita zvakanaka here kana kuti zvakaipa. Saka akabva atoronga kuuraya Jesu. Akazviita sei?
13 Mambo Herodhi akagumbuka chaizvo vazivi venyeredzi pavakabvunza nezvaiye “akaberekwa ari mambo wevaJudha,” uye aida kuuraya mwana wacho. (Mat. 2:1-3, 13) Kuti ave nechokwadi chekuti Jesu aurayiwa, akatuma vanhu kuti vauraye vakomana vose vaiva nemakore maviri zvichidzika vaigara muBhetrehema nomumaruwa aro. (Verenga Mateu 2:13-18.) Jesu akapukunyuka pakaurayiwa vana vose ivavo, asi izvi zvinoratidzei nezvemuvengi wedu Satani? Zviri pachena kuti Dhiyabhorosi haakoshesi upenyu hwevanhu, uye haana tsitsi nevana vaduku. Satani ‘ishumba inodzvova’ chaiyo. Usambotarisira pasi utsinye hwake!
SATANI ANE UNYENGERI
14, 15. Satani anopofumadza sei ‘pfungwa dzevasingatendi’?
14 Unyengeri ndiyo nzira chete inoshandiswa naSatani kuti atsause vanhu pana Mwari ane rudo Jehovha. (1 Joh. 4:8) Achishandisa unyengeri ihwohwo, Satani anoita kuti vanhu vasaziva “zvinodiwa zvavo zvomudzimu.” (Mat. 5:3) Naizvozvo anopofumadza pfungwa dzavo, “kuti varege kupenyerwa nokuvhenekera kwemashoko akanaka anokudzwa ane chokuita naKristu, uyo ari mufananidzo waMwari.”—2 VaK. 4:4.
15 Chitendero chenhema ndicho chinonyanya kushandiswa naSatani kunyengera vanhu. Anoziva kuti Jehovha “anoda kuzvipira kwakazara”! (Eks. 20:5) Saka Satani anofara chaizvo paanoona vanhu vachinamata madzitateguru avo, kana mhuka nezvimwewo zvinhu zvakasikwa. Zvinosiririsa kuti kunewo vakawanda vanofunga kuti vari kunamata Mwari nenzira yakanaka, asi ivo vachitevedzera dzidziso dzenhema netsika dzisingabatsiri. Ndozvakanga zvakangoitawo vaIsraeri avo vakanzi naJehovha: “Munorambirei muchiripira mari nokuda kwezvisiri zvokudya, munoshandirei zvakaoma nokuda kwezvisingagutsi? Nyatsonditeererai, mudye zvakanaka, mweya yenyu ifarire kwazvo zvakakora.”—Isa. 55:2.
16, 17. (a) Nei Jesu akaudza Petro kuti: “Enda shure kwangu, Satani”? (b) Satani angatinyengedza sei kuti tisaramba takarinda?
16 Satani anogona kunyengedza kunyange vashumiri vaJehovha vanoshingaira. Somuenzaniso, funga zvakaitika Jesu paakaudza vadzidzi vake kuti akanga ava pedyo nekuurayiwa. Hapana mubvunzo kuti muapostora Petro aiva nechinangwa chakanaka paakatora Jesu padivi akamuudza kuti: “Zviitirei mutsa, Ishe; hamungambovi nomugumo uyu.” Jesu akamupindura zvakasimba achiti: “Enda shure kwangu, Satani!” (Mat. 16:22, 23) Nei Jesu akadaidza Petro kuti “Satani”? Nokuti Jesu aiziva zvakanga zvava kuda kuitika. Nguva yokuti afe sechibayiro chorudzikinuro uye aratidze kuti Dhiyabhorosi murevi wenhema, yakanga yava kuda kusvika. Panguva iyi inokosha zvikuru munhoroondo yevanhu, zvakanga zvisina kukodzera kuti Jesu ‘azviitire mutsa.’ Satani aizoda chaizvo kuti Jesu atadze kuramba akarinda.
17 Sezvatava kusvika kumugumo wenyika ino yakaipa, nesuwo tiri kurarama munguva inokosha chaizvo. Satani anoda kuti ‘tizviitire mutsa’ nokuzvitsvakira upenyu hwakatinakira munyika ino, tokanganwa kuti mugumo wava pedyo. Usarega izvozvo zvichiitika kwauri! ‘Ramba wakarinda.’ (Mat. 24:42) Usabvuma kufurirwa nenhema dzaSatani dzokuti mugumo uri kure chaizvo kana kuti hausi kuzombouya.
18, 19. (a) Satani anoedza sei kutinyengedza? (b) Jehovha anotibatsira sei kuti tirambe takasvinurira uye takarinda?
18 Satani anoedzazve kutinyengedza neimwe nzira. Anoda kuti tifunge kuti hazviiti kuti Mwari atide uye kuti atiregerere zvivi zvedu. Dzose idzi inhema dzinoshandiswa naSatani kutinyengedza. Asi ndiani chaizvo asingadiwi naJehovha? NdiSatani. Ko asingazomboregererwi? NdiSatani zvakare. Bhaibheri rinotivimbisa kuti: “Mwari haasi munhu asina kururama zvokuti angabva akanganwa basa renyu norudo rwamakaratidza nokuda kwezita rake.” (VaH. 6:10) Jehovha anokoshesa zvose zvatinoita kuti timufadze, uye basa redu harisi pasina. (Verenga 1 VaKorinde 15:58.) Saka ngatisanyengedzwa nenhema dzaSatani.
19 Sezvataona, Satani ane simba, utsinye uye unyengeri. Tingabudirira sei pakurwisana nemuvengi anotyisa zvakadai? Jehovha haatisiyi tisina kudzivirirwa. Shoko rake rinotinyevera nezvenzira dzinoshandiswa naSatani, uye “mazano ake tinoaziva.” (2 VaK. 2:11) Kana tikaziva nzira dzake, hazvizotiomeri kuramba takasvinurira uye takarinda. Asi hatifaniri kugumira pakungoziva mazano aSatani. Bhaibheri rinoti: “Rwisanai naDhiyabhorosi, uye iye achakutizai.” (Jak. 4:7) Munyaya inotevera, tichakurukura zvinhu zvitatu zvatinofanira kungwarira kuti tikunde Satani.